खेल्दा खेल्दै पा,सो लागेर चितवनमा ८ वर्षिया बालिकाको गयो ज्यान – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/खेल्दा खेल्दै पा,सो लागेर चितवनमा ८ वर्षिया बालिकाको गयो ज्यान
चितवन – आफ्नै भाईबहिनि संग खेल्दा खेल्दै सलको पासो लागेर चितवनमा एक बालिकाको ज्यान गएको छ । चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नं. १६ दोबाटो बजारमा डेरागरी बस्ने संगीता सुनुवार कि ८ वर्षिया छोरी संजिता सुनुवारको सलको पासो लागेर ज्यान गएको हो । शुक्रबार बिहान करिब ९:३० बजे घटना घटेको घरबेटी ईश्वर श्रेष्ठले बताए ।
“३ जना बालबालिका आफ्नै कोठामा खेलिरहेका थिए । बालिकाकी आमा शौचालय गएकी थिइन् ।” त्यति नै बेला घटना घटेको संगै डेरा गरि बस्ने महिलाले उज्यालो नेपाललाई बताईन् । पलंग संगै रहेको झ्यालको रडमा सल अड्काएर खेल्दैगर्दा पलंग बाट चिप्लिएर घटना घटेको हुन सक्ने इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीका प्रहरी नायव उपरिक्षक ईन्द्र बहादुर रानाले जानकारी दिए ।
घाँटीमा पासो लागेर घाइते भएकी बालिकालाई उपचारको लागि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको भएपनि उनको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई छ । बालिकाको शवलाई पोष्टमार्टमको लागी भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ! स्थायी घर धादिङ्गको मैदी रहेको सुनुवार परिवार केहि वर्ष अघिदेखि पिठुवा दोबाटोमा डेरागरी बस्दै आएको स्थानीयले बताए। बालिकाको बाबु रोजगारीको क्रममा भारतमा रहेका छन् ।
सुनुवार परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको र उनीहरूको आफन्त पनि यँहा कोही नरहेको वडाध्यक्ष हेमराज थापाले बताए। सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवको अन्तिम संस्कारको लागी वडाध्यक्ष थापा आफै खटिएका छन्।उज्यालो नेपाल बाट